१५ स्थानमा वायुप्रदूषण मापनयन्त्र राखिने
काठमाडौं, साउन १२ । काठमाडौं उपत्यका तथा धुलिखेलका विभिन्न १५ स्थानमा वायुप्रदूषण मापनयन्त्र राखिने भएको छ । अहिलेसम्म वायु प्रदूषणको आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त गर्ने कुनै निकाय नभएकाले वातावरण विभागले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी उक्त यन्त्र राख्न लागेको हो ।
पोकेमन गो : जसको पछाडी दैनिक करोडौं दौडिन्छन्
काठमाडौं, साउन ११ । ‘मोबाइल गेम’ को दुनियामा ‘पोकेमन गो’ ले छोटो समयमा निकै लोकप्रियता हासिल गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा यो गेमप्रति युवा–युवतीको क्रेज देखिएको छ ।
भान्छाको फोहोरबाटै ग्यास निकालेर खाना पकाउने प्रविधि पोखरामा
काठमाडौं, साउन ११ । भान्छाको फोहोरबाट खाना पकाउने ग्यास निकाल्ने प्रविधि पोखरामा भित्रिएको छ ।
उर्जा संकट टार्न कृत्रिम रुख बनाइयो, एउटा प्लान्टबाट ५ घरमा विद्युत
नयाँ दिल्ली, साउन १० । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्युत संकट कम गर्नका लागि सरकारले नयाँ उपाय अपनाउन थालेको छ ।
पुनिर्निर्माणमा इन्जिनियरले काम पाएनन्
काठमाडौं, साउन ९ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका इन्जिनियर कामविहीन भएका छन् । समयमै अनुदान रकम नपाएर भूकम्पपीडितले घर निर्माण सुरु नगरेकाले इन्जिनियरहरू कामविहीन भएका हुन् ।
नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा छिट्टै फोरजी सेवा सन्चालन हुने
काठमाडौं, साउन ३ । सरकारले मोबाइल प्रयोगकर्ताको सुविधाका लागि आगामी असोज(अक्टोबर) महिनापछि नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा ‘फोरजी’ सेवा सन्चालनमा ल्याउने भएको छ । सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले तीन महिनापछि यो सेवा सन्चालनमा ल्याउन प्रयास भइरहेको बताए ।
रुकुममा डिजिटल नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा
रुकुम, असार २९ । पुरानो नागरिक वडापत्र सर्वसाधारणका लागि पढ्न गाह्रो र झन्झटिलो भएको भन्दै जिल्ला समिति रुकुमले डिजिटल नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नयाँ ‘एनसेल सप’ अब लबिम मल र बालाजुचोकमा
काठमाडौं, असार २२ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले काठमाडौं र ललितपुरमा नयाँ अवधारणाको एनसेल सप सन्चालनमा ल्याएको छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिम मल र काठमाडौंको बालाजुचोकमा एनसेल सप सन्चालनमा ल्याएकोे जनाइएको छ ।
घरायसी सामग्रीबाटै एक नेपालीले बनाए तोप र कार (भिडियोसहित)
पोखरा, असार १९ । पर्वत घर भई हाल पोखरा बस्दै आएका एक युवाले घरायसी सामग्री प्रयोग गरेर अत्याधुनिक विज्ञानका सामग्रीहरु निर्माण गरेका छन् ।
भूकम्पले नियन्त्रण बिन्दूलाई नै खलबल्याइदियो, असर के हुन्छ ? के हो यो ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, असार १७ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । भूकम्पका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै भूमापनसँग सम्बन्धित ‘नियन्त्रण बिन्दू’हरुलाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । तपाइँलाई थाहा छ ? तपाइँ–हामी बसेको भूगोल, यहाँ रहेको हिमाल अनि पहाडका नापनक्सा गर्ने काम कसरी हुन्छ ?
प्राविधिक मेला सुरु
काठमाडौं, असार १७ । १३औं राष्ट्रिय प्राविधिक मेला शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजअन्र्तगतको इलेक्टो«निक, इलेक्टो«निस तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागका विद्यार्थीहरुको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय प्राविधिक मेलामा विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक परीक्षामा बनाएका सामग्रीहरु राखिएका छन् ।